Global Voices teny Malagasy » Mametraka An-tSarintany Ny Fahafatesan’Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Janoary 2016 8:08 GMT 1	 · Mpanoratra Endalkachew Chala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Etiopia, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika
Oromo mpanao fihetsiketsehana mivorivory ao Addis Ababa. Sary Flickr navokan'ny  mpisera Gadaa.com.
Fampitandremana: Ny sarintany ifarimbonana dia miaty sary mampihoron-koditra sy manohintohina.
Hatramin'ny fanombohan'ny volana Novambra 2015, dia farafahakeliny 140  ireo mpanao fihetsiketsehana milamina no maty novonoina tao Ethiopia araka ny fampitam-baovaon'ny Human Rights Watch Mpanara-maso ny Zon'Olombelona ary ny porofa an-dahatsary no mametraka fa ny anknamaroan'ireo olona maty ireo dia voatifitra amin'ny bala tena izy eo akaiky dia akaiky.
Misy ihany koa ny tatitra  nataon'ny Oromo mpikatroky ny zon'olombelona manondro fa farafahakeliny dia 10 ny olona maty nandritra ny fampijaliana azy ireo tany am-ponja.
Samy iharan'ny herisetra ataon'ny governemanta avokoa na mpianatry ny oniversite, vehivavy, tantsaha na mpampianatra an-tsekoly. Amin'ireo maty ireo dia mihoatra 70% ny mpianatra lehilahy. Ny Tantsaha lehilahy indray tokony ho eo amin'ny 20%-n'ny maty. Vehivavy ny ambiny. Vehivavy bevohoka fito volana miaraka amin'ny zaobaviny no maty voavono raha nandositra fisamborana. Nolazaina fa hita tany amin'ny tany karankaina ny fatin'izy ireo andro maromaro taorian'ny fanjavonany.
Eto ambany misy sarintany ifarimbonana natsangan’ ny mpanoratra amin'ny teny anglisy niaraka tamin'ny fanampian'ny Oromo mpikatroka Abiy Atomssa. Olona 111 maty nandritra ny fihetsiketseham-panoherana naharitra am-bolana no tafiditra lisitra ato amin'ity sarintany ity. Miangavy izay rehetra manana porofom-pahafatesana na fanjavonana mpanao fihetsiektsehana hifandray aminay amin'ny alalan'ny editor@globalvoicesonline.org.
Na dia eo aza ny porofo efa voalaza, dia milaza ny governemanta Ethiopiana sy ny mpaneho hevitra  pro-governemanta fa eo amin'ny olona dimy eo no maty.
Tamin'ny antsafa  tamin'ny fampielezam-peo ny filohan'ny vaomieran'ny zon'olombelona pro-governemanta, Addisu Gebregziabher  no nilaza fa ho ny fiarovana ny filaminana dia voatery hampiasa hery amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny governemanta.
Nanomboka ny fihetsiketsehana rehefa nikasa ny hanitatra ny renivohitra Addis Ababa mankany amin'ny tany tsy misy monina an'ny vondrona ara-poko Oromo, izay manana ny ampahatelon'ny mponin'i Ethiopia, ny governemanta. Vao maika nanampy trotraka tamin'ny faharatsian'ny fifandraisana misy ao amin'ny Oromo sy ny governemanta izay fehezin'ny mpikambana ara-poko vitsy an'isa avy any avaratra, Tigrayan, ny fifandraisana efa ratsy nisy teo aloha. Ny vahoaka Oromo izay miavaka ara-kolontsaina no mitaraina amin'ny tsy fisian'ny fanararaotra ara-toekarena sy ny herisetram-panjakana tsy mitsahatra ny mihatra amin'ny vondrom-piarahamonina Oromo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/01/11/78178/
 mpaneho hevitra: http://hornaffairs.com/en/2015/12/09/ethiopia-death-toll-oromia-protests/